uyisebenzisa kanjani ifowuni njengekhampasi + eyona app ikhampasi ilungileyo ye-android
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uyisebenzisa kanjani ifowuni njengekhampasi + eyona app ikhampasi ilungileyo ye-Android
Ukuba uyayazi indlela yakho ejikeleze i-smartphone, ke wena kunye ne-apos ngokuqinisekileyo uyazi ngokuhambelana kwazo. Kukho inani elininzi lezixhobo zemihla ngemihla kunye nezixhobo ezinokuthi zithathe indawo ye-smartphone, njengekhamera, unomathotholo, iwotshi yealam, isibane, isishicileli sesandi ... Ikhampasi ethobekileyo ikuluhlu olo, njengoko unokwazi okanye ungazi. Ngaphakathi kwisiphatho sesiphatho sakho, kukho umazibuthe omncinci ojikeleza i-axis kwaye walathe kwiplanethi esemantla.
Kulungile, saxoka. Ukusebenza kweCompass kwiifowuni kunye neetafile kunikwe amandla yinto ephucukileyo ngakumbi - isivamvo esibizwa ngokuba yimagnetometer, esetyenziselwa ukulinganisa amandla kunye nolwalathiso lweemagnethi zomhlaba. Ngokuhlalutya umhlaba we-magnetic & apos, inzwa ivumela ifowuni ukuba ichonge ukuma kwayo ngokuchanekileyo.
Ngaba ifowuni yam inayo ikhampasi?
Ikhampasi yeSamsung kunye neapos zifihle kwiPaneli ye-Edge Ngaba ifowuni yakho ye-Android inayo imagnetometer? Yup, amathuba kukuba ayenza njengoko izixhobo ezininzi ze-Android zisenza. Nokuba unefowuni endala okanye enexabiso eliphantsi, kunokwenzeka ukuba kukho i-magnetometer ngaphakathi kuyo. Kwaye, zininzi ii -apps ezisebenza phaya ezisebenzisa loo magnetometer ukubonisa ikhampasi yedijithali kwiscreen sefowuni yakho.
Ngoku, ezinye zegama elikhulu ziya kubandakanya usetyenziso lwekhampasi okanye ukusebenza kwiifowuni zabo- umzekelo, i-Samsung inePaneli yezixhobo ezikhawulezileyo, kunye nekhampasi yewijethi efakwe kuyo, ngelixa iiHuawei kunye neapos; eyahlukileyo usetyenziso lweCompass. Ukuba awuqinisekanga ukuba unayo le nto kwifowuni yakho, yenza ukhangelo olukhawulezayo- eyona ndlela ilula yokukhangela usetyenziso kukucofa kwiwijethi yokukhangela kuGoogle kwiscreen sasekhaya kwaye uchwetheze 'ikhampasi'. Ngaphandle koko, khangela ukuba i-drawer yakho ye-app inayo ibha yokukhangela, okanye jonga i-app ngesandla ukuba unesibindi sokwenza njalo.
Ngayiphi na imeko, isitokhwe se-Android asinayo i-app yayo yekhampasi, ngenxa yoko amathuba aphezulu unokulahleka. Kodwa ke, kukho iiapps zayo yonke into! Ngokwenyani, nantsi i-apos; uluhlu lonke olubonisa ezona zixhobo zeekhampasi zibalaseleyo ze-Android:
Eyona nkqubo ilungileyo yeCompass yeApple
I-Compass Galaxy okwangoku yeyona app ikhowudi ilinganisiweyo kwiVidiyo kaGoogle. Inesitayile esihle kwaye ayinazintengiso kwaye yenza kuphela eyona khampasi isebenzayo. Singathanda ukuba ubuncinci ubenakho ukubonisa isikhombisi sakho xa wena & apos uyibambe nkqo ngokuthe nkqo, kodwa nangona kunjalo, ukuba awudingi naziphi na iintsimbi kunye neempempe, le app iyakuhambelana neemfuno zakho ngokugqibeleleyo.
Khuphela i-Compass Galaxy ye-Android
Ikhampasi inendlela ecocekileyo kwaye iqonde ngqo kodwa inezinye izinto ezongezelelweyo. Usebenzisa idatha kwifowuni yakho kunye neenkonzo zendawo (ukuba uyayivumela) usetyenziso luzakubonisa ukuphakama kwakho, ngqo nobude kunye nokuphuma nokutshona kwelanga amaxesha. Zonke ezi zinokuba ziluncedo xa unyuka ezintabeni.
Khuphela nje iCompass ye-Android
I-Smart Compass ye-Android lolunye usetyenziso esingacebisi ukuba ufuna ezinye izinto eziphambili. Ngaphandle kwemisebenzi yekhampasi yesiqhelo, ikwavumela ukuba ubambe ikhampasi kwiimephu zikaGoogle okanye nokuba unayo phezu kwesondlo sevidiyo ukusuka kwikhamera ejonge ngasemva ye-smartphone yakho. Ngoba? Ewe, ukuba ubambe ifowuni yakho nkqo, umnqamlezo uya kubonakala usalatha ngqo kulwalathiso ekufuneka ulwenzile ukuze ulandele isidanga esibonisiweyo. Ubulumko, huh? Ungalicima uphawu lwekhamera kwimenyu yokuseta ukuba ukhetha ukugcina ibhetri yakho. Kwaye ukuba uyayithanda iapp, cinga ngokuxhasa umphuhlisi wayo. Inguqulelo yePro ye-Smart Compass ($ 0.99) yongeza isantya kwaye ikhetho ukuthumela ulungelelwaniso lweGPS ngeSMS okanye nge-imeyile.
Khuphela i-Smart Compass ye-Android
Olunye ukhetho, ukuba uthanda ikhampasi yedijithali ekhangeleka yanamhlanje, emhlophe-emnyama, jonga iCompass nguR. I-apos ayifakwanga, kodwa ijongeka intle kwaye ichanekile. Le nto ilungiselelwe le app kukuba uninzi lwee -apps zekhampasi azinanqanaba elikuvumela ukuba ujonge ukuba iishelfu zakho ziyalinganiswa okanye ukuba itafile yakho ephezulu ithe tyaba ngokugqibeleleyo.
Khuphela iCompass nguR. Apps ze-Android
Kodwa ngaphambi kokuba usebenzise usetyenziso lwekhampasi ngokufanelekileyo, kufuneka ulungelelanise ifowuni kunye neapos; s isivamvo semagneti. Uninzi lweapps ziya kukukhumbuza ukuba uyenze usiya phambili, kodwa ezinye azizukukhathaza kwaphela. Nokuba yeyiphi indlela, bonke bayaxhamla kwinkqubo efanayo yokulinganisa.
Indlela yokulinganisa ikhampasi kwi-Android
Ukulinganisa ifowuni yakho ye-Android kunye ne-apos; s magnetometer emva kokumilisela i-app yakho yekhampasi oyithandayo, yiphakamise kwaye uyijikeleze ngendlela eyi-8 Iijikelezo ezininzi kufuneka zenze iqhinga. Ngelixa ulungelelanisa, qiniseka ukuba ii & apos zikude kwiikhompyuter, iifeni zombane, ii-Wi-Fi routers, okanye ezinye izinto zombane njengoko zinokuphazamisa isivamvo semagnethi kunye nokufundwa kwayo. Isinyithi ayamkeli nokuba yeyiphi, susa nayiphi na amakhonkco okanye ubucwebe obukufuphi kwifowuni yakho. Ke ngoku ikhampasi yedijithali kufuneka ikhombe (ngokufanelekileyo ngokuchanekileyo) ukuya kwipali esemantla.
Kwaye yiloo & ampos; yiyo! Nguwe & apos; ukuseta konke kubumnandi bakho bangaphandle!
Ii-Smartphones ezinentlawulo ekhawulezileyo: ngokukhawuleza ukukwitshaja kwakhona ukusuka kwi-0% ukuya kwi-100%, ukusuka kwi-Galaxy ukuya kwi-iPhone
Iimeko zeGoogle Pixel 3 XL kunye nePixel 2 XL aziyi kutshintshana, imifanekiso iyaqinisekisa
Imeyile ye-Yahoo ye-Android GO isungulwe kunye nohlobo lwezikhangeli zewebhu
Iiselfowuni zaseMelika zikhupha uhlaziyo lwe-Android 7.1.1 Nougat kwi-Samsung Galaxy Tab E